KABAX CIDLA CIIRSI LA’AANTA – KAALMO DHIBANAHA LA DULMIYEY - Ihmiskauppa
KABAX CIDLA CIIRSI LA’AANTA – KAALMO DHIBANAHA LA DULMIYEY
Ku ganacsiga dadka waa denbi culus. Taasina waa isticmaalis ka faa’iideysi qof kale. Waxayna ku imaan kartaa qalad u sheegis, qasbitaan, u hanjabis, baqdin gelin ama inaad kaga faa’iideysato daciifnimo qof kale ama marrasnimo, baahi dhaqaale ama dhib kaloo heysta awgeed. Waxyaabahaas oo ku kalifa qofka dhibaateysan in la yiraahdo samee isagoon raali ka aheyn, tusaalle.
gadis jirkiisa qaab galmeysi ah
qabasho shaqo aan munaasib aheyn
Ku ganacsiga ama dulminta qofka ma aha mid mar keliya dhacda, ee waa dhacdo tixane ah oo socon karta sanado baddan. Dhibanaha dulmana wey adag tahay sidoo uga bixi karo ama uu ku diido karo isagoon kaalmo ka helin bannaanka.
Suurtogal ma tahay inaan ahey qof lagu ganacsadey/dulman?
Waa suurogal iney adag tahay garashada inaad tahay qof lagu ganacsadey/dulman, mana aha in dhi-banuhu og yahay inuu yahay dhibane qof lagu gancsadey/dulman. Bal eeg iney ku saameyneyso su’aalahan. Haddii ay jawaabtaadu tahay ”haa” waxaa suurogal ah inaad tahay ama astaan u tahay lagu ganacsade/dulmane.
Qof miyaa kugu qasbaya inaad sameyso waxaadan rabin sameyntooda?
Haddii aad tahay qof u go’ay mukhaadaraad, ma jiraa qof kaaga faa’iideystey baahida mukhaa-daraadka oo ku yiri samee howl, taasood rabin sameynteeda?
Ma jiraa qof kaaga faa’iideystey sharci la’aantaaad ku joogto waddanka oo ku yiri samee howlo aadan rabin inaad sameyso?
Ma jiraa qof kaaga faa’iideystey hoy iyo dhaqaale la’aanta ku heysata oo ku yiri samee howlo aadan rabin inaad sameyso?
Ma jiraa qof kugu hanjabaya inuu kuu sheegayo dowlada, haddaadan u yeelin siduu kaa rabo?
Ma jiraa qof kuugu hanjabaya inuu kugu ceebeeyo saaxiibadaa ehelkaaga iwm. Haddii aadan yeelin ammarkiisa?
Ma jiraa qof kugu leh deyn, kaasoo, kugu qasbaya inaad sameyso waxaadan rabin?
Ma jiraa qof kuu hanjabaaya adiga ama reerkaaga?
Ma u baqaneysaa ammaanka naftaada iyo reerkaaga?
Ma mushaar yar baa lagu siiyey mise lagumaba siin wax mushaar ah waxna kama oran kartid arrinka?
Ma laguu diidey inaad ka hahadasho arrinka ama raadsato kaalmo?
Ma laguu diidey xoriyadaada dhaqdhaqaaq ama socodkaaga lagu dabo dhigey waardiye?
Ma daremeysaa in, xaalada aad ku jirto la da’hey meel aad uga baxsato?
Dadka lagu ganacsado/dulman xaq bey u leeyihiin in la caawiyo
Dadka lagu ganacsado/dulman xaq bey u leeyihiin adeeg iyo in la caawiyo. Adeegyadaasna waxaa ka mid ah tusaalle:
Hoy amni ah
Adeeg daryeel caafimaad
Adeeg arrimo bulshadeed
Guno dhaqaale ama lacagta kaalmada nolosha
Talo-siin sharciyan iyo ka caawin qareen sida sharciga waafaqsan
Adeeg turjubaan iyo turjumis
Talo-siin iyo hagitaan xalinta arrinkaaga
Ka caawin iskaa ugu noqosho waddankaaga, haddaad rabto inaad ku noqoto wadankaaga
Tusmo iyo talo la xiriirta dalbasho sharci degenaansho
Ka caawin dacwo oogista denbiga iyo heerka denbiga
Haba yaraatee caawimo waad heli, taas macnaheeda shardi ma aha inaad xog ogaal u tahay inaad tahay dhibane lagu ganacsade/dulman. Caawimada waad heli iyadoon laguu eegeyn jinsiyada aad wato, da’daada, jinsigaaga ama labeeb iyo raga-raga la baxa, diintaada ama fikirkaaga siyaasadeed. Sidoo kale caawimo waad heli kartaa xitaa:
inaad adigoon cidana ku qasbin aad arrinkan gashey
adigu aad tahay denbiile
sharci daro waddanka ku joogtid
Waxaa lagu caawin karaa oo keliya, markaad caawimo dalbatid.
Finland dhibanaha lagu ganacsadey/dulman waxaa caawiya hay’ada gargaarka dhibanayaasha lagu ganacsa-dey/dulman, kuwaasoo ah shaqaale dowladeed. Hay’adan gargaarka waxay leedahay teleefon heegan ah habeen iyo maalin, kaasood la soo xiriiri karto una sheegan karto xaaladaada iyo baahidaadaba teleefonkuna waa:
La soo xiriirista ma aha in lagugu qasbayo adeega ay bixiyaan ee waa la sheekeysi hay’ada gargaarka aad kala sheekeysaneyso macnaha ay kuu yeelaneyso inaad hesho caawimo kugu habboon adiga. Waad kula soo xiriiri kartaa xitaa hay’ada foomka internetka laga buuxiyo
Dhibanayaasha lagu ganacsadey/dulman waxaa sidoo kale caawiya hay’ada la dagaalanka ku gancsiga/dulminta. Hay’adaasi waad ka heli adeeg midka ku yar.
Haka cabsan inaad nala soo xiriirto. Waanu ku caawin adiga.